जाडोमा बढी सताउँछ बाथले | Nagarik News - Nepal Republic Media
जाडोमा बढी सताउँछ बाथले
७ मंसिर २०७६ १३ मिनेट पाठ
अरु मौसमको तुलनामा जाडोमा बाथरोगी बढी पीडित हुन्छन्। बाथरोग महिलामा किन बढी हुन्छ ? नेपालमा कुन बाथ बढी पाइन्छ ? प्रस्तुत् छ नागरिककर्मी पवित्रा सुनारले वीर अस्पतालका बाथरोग बिशेषज्ञ डा.अन्जल बिष्टसित गरेको कुराकानी।
चिकित्सा सेवामा कति वर्ष बित्यो ?
– ११ वर्ष भयो। सन् २००७ मा सरकारको छात्रबृत्तिमा बंगलादेशमा एमविविएश सकेपछि यो सेवामा लागें। त्यही क्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानवाट एम डी र भारतको नयाँ दिल्लीवाट बाथरोगमा एक वर्षे फेलोसिप गरेपछि वीर अस्पतालमै निरन्तर छु।
– बाथरोग दीर्घरोग हो। धेरै बिरामीहरुले बाथरोगका बिरामीले केही समय औषधी खाएपछि वीचमै छोड्नु हुन्छ। त्यस कारण रोग बल्झिने गरेको देखिन्छ। शरिरमा एक किसिमको इम्युन सिस्टम हुन्छ। यसको काम बाहिरी संक्रमण हुन नदिनु हो। शरिरको प्रतिरक्षा व्यवस्थाका कुनै कारणले समस्या आएमा शरिरभित्र रहेको कोषिकाले आफ्नै कोषिकालाई बाह्य जीवाणु ठानेर ती कोषिकालाई नष्ट गर्ने र शरिरमा एन्टीवडी निर्माण गर्न थाल्छन्। तव बाथरोगको बिभिन्न लक्षण देखिन थाल्छन्।
नेपालमा प्रचलित बाथरोग कुन कुन हुन् ?
– सवै भन्दा बढी देखिने गरेको रुमाटिक आर्थटाइटिश(गठियाँ बाथ),ओष्ट्रियो आर्थटाइटिश(हड्डी खिइने बाथ) तेस्रो युरीक एसिड बाथ र चौथो मेरुदण्डको बाथ प्रचलित छन्। तर सवै प्रकारका बाथ महिलामा बढी देखिन्छ।
महिलाहरुमा बाथरोग बढी हुनुको कारण ?
– महिलाहरुमा हुने हर्मोनको असन्तुलनले पनि बाथ हुने गरेको देखिन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलामा स्ट्रोजन हर्मोन महिलामा असमान हुन्छ। जस्तो महिनावारी बन्द भएपछि लुपस बाथ महिनामा बढी देखिन्छ। यस्तो हुनु भनेको कुनै कुनै रुपमा महिलामा हुने हर्मोनको भूमिका देखिन्छ। तर गठियाँ बाथ,कनेक्टिभ टिसयु रोग(लुपस बाथ),हड्डी खिइने समस्या पनि महिलामा बढी देखिन्छ। तर पुरुषमा बढी देखिने बाथ चाहिं मेरुदण्डको बाथ र गाउट आर्थटाइटिश(युरिक एसिड बाथ) बढी देखिन्छ। ओष्टियो पोरोसिश पनि महिलामा बढी देखिन्छ। यो रोगमा हड्डी खिइएर छिद्र पर्ने,सानै चोटमा पनि हड्डी भाँचिने जस्ता समस्या हुन्छन्।
महिलाहरुमा बाथ मध्येमा पनि बढी देखिने बाथ चाहिं कुन कुन हुन् त ?
– ओस्ट्रियो पोरोसिस र गठियाँ बाथ बढी देखिन्छन्।
कुनै औषधीको प्रयोगले पनि बाथ रोग हुन्छ भनिन्छ नि ?
–महिलामा हुने हर्मोनको पनि भूमिका हुन्छ। यसको साथै दम तथा बाथ रोगमै प्रयोग हुने स्टरेइड औषधीले ओस्टियो पोरोसिस हुन्छ।
गठिया बाथ किन महिलामा बढी हुन्छन् ?
– गठिया बाथ बंशाणुगत कारण तथा महिलामा हुने हर्मोनको कारणले देखिन्छ।
गठिया बाथको लक्षण के के हो ?
– हात तथा खुट्टाका स– साना जोर्नीहरु जस्तो औला तथा खृुट्टाका जोर्नीहरु सुतेर उठ्दा कक्रक्क हुने, सुन्निने कहिलेकाँही ठूलै जोर्नी सुन्निने,कुर्कुच्चाको जोर्नी सुन्निने र हिंडडुल गर्दै गएपछि जीउ तात्दै गएर सामान्य जस्तो हुने। कसै–कसैको औलाहरुमा गिर्खा आउने पनि हुन्छ। औलाहरु बांगिदै जाने,लामो समय भयो भने आँखा तथा मुखको ग्रन्थीमा समस्या आउने हुन्छ। मुख सुख्खा हुने, आँखा सुख्खा हुने हुन्छ। लामो समय उपचार भएन भने फोक्सोमा समेत असर पुगी दम आउने,श्वा–श्वाँ हुने, मुटुमा पानी जम्ने, श्वास फेर्न गाह«ो हुने र रक्तअल्पता हुने,रिंगता लाग्ने,रगतमा बिभिन्न तत्वको कमी हुने जस्ता लक्षण हुन्छ।
बिरामीले गठिया बाथ हुँदैछ भनेर कसरी समयमै थाहा पाउने ?
– मुख्य कुरा जोर्नीहरु दुख्ने,सुन्निने,विहानी पख झनै दुख्ने,काम गर्न थालेपछि थाहा नहुने,आरम गरेपछि झनै दुख्ने अवस्था भएमा गठिया बाथ हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन्ु पर्छ र वेलैमा उपचारमा जानु पर्छ।
यो बाथको छिटो उपचार भएन भने के हुन्छ ?
– जति सक्दो चाँडो उपचार गरेमा निको हुन सक्छ। तर ढिला भएर असर देखिइसकेपछि पुर्ण निको हुन सम्भव छैन। सामान्य मात्र लक्षण देखिने बित्तिकै उपचारमा जानु नै मुख्य उपाय हो।
नेपालमा बाथरोगी कुन अवस्थामा उपचारमा पुग्छन् ?
– नेपालमा ग्रामिण भेगबाट ढिला उपचारमा आउँछन्। जोर्नीहरु दुखेमा नदुख्ने औषधीको सहारामा लामो समय बस्छन्। समस्या धेरै नै जटिल बन्दै गएपछि मात्र उपचारमा आउने गरेको देखिन्छ। उनीहरु एक पटक स्टेरोइड (बाथमा दिइने औषधी)बर्षौंसम्म आफुखुशी खाइदिने चलनले बाथरोग जटिल बन्ने गरेको देखिन्छ। यसले फोक्सोदेखि मुटुसम्म असर गर्ने भएकोले बाथलाई जोर्नीको रोगको रुपमा मात्र लिएर ढिला उपचारमा आउनु भएन।
नेपालमा ओष्ट्रियो आर्थटाइटिश महिलामा किन बढी हुन्छ ?
– महिलामा हुने हर्मोन,मोटोपना,अन्य रोगहरु मधुमेह,कोलस्ट्रोल जस्ता रोगहरु भएको अवस्था,परिवारमा पहिल्यै अरुलाई यो रोग भएमा,कुनै किसिमको चोटपटक लागेमा पनि यो बाथ हुन्छ। जस्तो खेलाडीलाई कुनै समय चोट लागेको छ भने भविष्यमा गएर अष्टियोआर्थटाइटिश हुने सम्भावना हुन्छ। बंशाणुगत कुरालाई बदल्न सक्दैनौं। तर अन्य जीवनशैली र रोगसित जोडिएको अवस्थालाई नियन्त्रणमा राखेर बाथरोगबाट बच्न सकिन्छ। जस्तो कोलस्ट्रोल,मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
ओष्टियोआर्थंटाइटिशको मुख्य लक्षण के हो ?
– यसको मुख्य लक्षण भनेको ठू– ठूला जोर्नी समात्छ। सवै भन्दा बढी घुँडा,हिप र कुकुृच्चाको जोर्नीमा असर पु-याउँछ। यसको लक्षण उल्टो हुन्छ। यो बाथमा हिंड्दा,सिंढी चढ्दा गाह्राे हुने हुन्छ। कुर्सीबाटै ओर्लिन गाह्राे हुने हुन्छ। जोर्नीमा आवाज आउने हुन्छ। शरिरको हातको औलाहरु सुन्निने,हातका जोर्नीहरु दुख्ने,हातका टुप्पाका जोर्नीमा गिर्खा आउने हुन्छ। केही कुरा समाउन गाह्राे हुने लगायतका लक्षण देखिन्छन्।
यो बाथमा ठूला जोर्नी मात्र किन समात्छ ?
– चोट लाग्ने सम्भावना पनि तलको जोर्नीमा हुन्छ। भार थेग्ने जोर्नी पनि तलका ठूला जोर्नी नै हुन्। त्यस कारण यसलाई भार पर्छ । कमजोर जोर्नीमा मोटोपना थपियो र भार थेग्नु प-यो भने यसैमा समस्या देखिने हो।
बाथरोगीलाई जाडोमै किन सताउँछ ?
– जाडोमा वातवरणमा परिवर्तन आइ चिसोपना बढेको हुन्छ। चिसोपनाले गर्दा दुखाइ बढी अनुभव हुन्छ। दुखाइ थाहा पाउने अंग बढी संवेदनशिल हुन्छ।
जाडोमा बाथरोगीले कसरी हेरचाह गर्ने त ?
– जाडोमा औला निलो हुने,रक्तसंचारको कमीले यस्तो हुन्छ। जाडोले रगतका नशाहरु खुम्चाइदिन्छ। यस्ता बिरामीले पंजा,मोजा लगाउने,न्यानो लुगा लगाउने। औषधी नियमित सेवन गर्ने र शरिरलाई न्यानो अवस्थामा राख्ने,हिंडडुल गर्न नछोड्ने जस्ता ख्याल पु-याउनु पर्छ। सामान्य र जाडो अवस्थामा रुघाखोकी लागेका विरामीको छेउछाउमा नजाने गर्नु पर्छ। फ्लु बिरुद्ध र निमोनियाँ बिरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ।
यो अस्पतालमा बाथरोगी दैनिक कति आउँछन् ?
– दैनिक ७० देखि ८० जना आउँछन्। जसमा ५० प्रतिशत नयाँ हुन्छन्।
बाथका बिरामीले कस्तो खाना खाने ?
– बाथको रोगीले कस्तो खाना खाने भन्ने विषयमा समाजमा आफ्नै प्रकारका भ्रमहरु छन्। कतिले मासु नै हुँदैन,गेडागुडी खानु हुँदैन,अरु के के खाने कुरा खानु हँुदैन भन्ने भ्रम छ। सामान्य व्यक्तिले जस्ता खाना खानु पर्छ। चिनी,कोल्ड ड्रिकंस नखाने, रक्सी,रातो मासु खानु ,धुमपान खानु हुँदैन।
बाथका बिरामी जाडोमा कसरी हेरचाह गर्ने ?
– जाडोमा बाथ बढ्ने सम्भावना हुने भएकोले चिसो मौसमबाट बच्ने,शरिरलाई सकृय राख्न व्यायम गर्ने,न्यानो कपडा लगाउने लगायतको सर्तकता अपनाउनु पर्छ।
बाथ,हर्मोन र दममा प्रयोग हुने स्टेइड भनेको के हो ?
– शरिरभित्रै हुने तत्व हो। यो शरिरमा हुन्छ र अर्को बाह्य हुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने भनेको कृत्रिम हर्मोन हो। भित्री स्टेइड हर्मोन हुन्छ। शरिरको कुनै किसिमको रक्तनली,फ्युल संचालन गर्ने काम गर्छ। त्यस बाहेक शरिरमा हुने इन्फलामेशन कम गर्ने काम गर्छ। जुन इन्फलामेशन कम गराउनको लागि यो औषधी दिइन्छ। सुन्निएको,दुखेको समस्यामा दिइन्छ। तर यसको सही रुपमा प्रयोग गरेमा फाइदा गर्छ। ठीक तरिकाले नखाएमा यसले हड्डी खियाउन सक्छ। त्यस कारण यो औषधी चिकित्सकको सल्लाहमा खानु पर्छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७६ ०७:५३ शनिबार